Hagaajinta Tilmaamaha Bilowga: Bilaabidda Shabakadaha
. Maanta, haddii aad isticmaasho qalabka wax lagu soo saaro, waxaad soo dejisan kartaa wax kasta oo aad jeceshahay. Waxaa jira tiro barnaamijyo software ah oo online ah oo bixiya qaar ka mid ah fursadaha soo saaridda. Dhab ahaan, xoqista ayaa leh codsiyo badan. Tusaale ahaan, waxaad heli kartaa liisas kala duwan, xiriiro, emails, badeecooyin iyo waxyaabo kale oo badan. Sidaa darteed, shirkado badan oo SEO ah iyo dukaamada e-dukaanka ayaa isticmaala habkan si loo hagaajiyo tayada adeegyadooda.
Waxaa jira websaydo aan u oggolaanin inay xoqdo. Sidaa darteed, dadka isticmaala waxay u baahan yihiin inay aad u taxaddaraan markay booqanayaan bog internet si ay u soo dejiyaan waxyaabo gaar ah. Waa lagama maarmaan in la akhriyo shuruudaha iyo shuruudaha bogga kasta oo aad booqatid si aad u hubiso inaadan ku xad gudbin sharciyo kasta. Haddii kale, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto dhibaatooyin dhowr ah, sida arrimaha sharciga. Raadinta internetka waxay u baahan tahay in ay xasuusnaato in ay isticmaali karaan shabakadda webka oo ah qalab wax ku ool ah oo shaqadooda ah iyo waxyaabaha soo saarista sababo wanaagsan. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ogaato qiimaha alaabta kale ama macluumaadka xiriirka macaamiisha iman kara. Tani waxay kaa caawin kartaa hagaajinta adeegyadaada adiga oo bixinaya alaab tayo sare leh qiimaha wanaagsan.
Barnaamijka Barnaamijka Python
Webka xajinta waxaa lagu samayn karaa luuqado kala duwan. Tusaale ahaan, sawirrada shabakadda waxay isticmaali karaan barnaamijka barnaamijka Python, luqad fudaydin iyo firfircoon oo bixiya adeegyo badan oo waxtar u leh dadka isticmaala. Dhab ahaantii, waa qalab wax soo saar leh oo loogu talagalay dadka bilowga ah iyo dadka isticmaala khibradaha. Iyadoo Python, way fududahay in la soo saaro xogta daqiiqado gudahood adigoo isticmaalaya mid ka mid ah maktabaddiisa. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa isticmaalka quruxda quruxda, taas oo ah qalab weyn oo loogu talagalay ururinta xogta shabakadda.
Isticmaalayaasha u baahan inay helaan meel gaar ah oo websaydh ah, waa inay soo dejiyaan HTML code si ay u falanqeeyaan mar dambe. HTML waa code kaasoo ku jira dhammaan macluumaadka qaraabada ah ee laga yaabo in qofku u baahan karo. Sidaa darteed, macluumaadka loo baahan yahay, sida liiska xiriirka ama qiimaha, waxaa lagu heli karaa iyadoo la falanqeynayo xeerkan. Raadinta Webka waxay isticmaali kartaa maktabad gaar ah, sida Scrapy ama Beauty Soup, si loo kala saaro HTML code oo aad hesho dhamaan xogta lagama maarmaanka ah gudahooda. Laakiin sidee u kala saari kartaa koodhka HTML? Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in cinwaanka HTML ee aad leedahay uu sax yahay kadibna cadee cinwaanka bogga. Waxaad u dhaqaaqi kartaa adiga oo soo ururiya dhamaan macluumaadka gaarka ah ee boggan. Si aad u guuleysatid, waa inaad falanqeeysataa dhismaha hannaanka HTML. Samee tan adigoo isticmaalaya kormeeraha kormeeraha Source .